Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma echiche iji jide n'aka na ahịhịa na-bupụrụ enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge iji jide n'aka na usoro ibu na-akọrọ na nke kacha mma n'ụzọ. Site n'ime otú a onye ọrụ ahụ ga-enwe ike iji nweta ndị kasị mma na ndị kasị dị irè usoro ma na e nwere drawback na ọ bụ na ọdabara ndị niile na ndị ọrụ na-adịghị nsị ahịhịa site na-achọ n'ime faịlụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa ka-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà nhazi nke ahịhịa bụ otu na e mere na enyemaka nke n'ozuzu faịlụ nhazi ọkwa dị ka ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere na dị mkpa faịlụ na a kpaliri n'ebemkpofuozi ezighị na n'oge gara aga na-weghachiri eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Iji nweta ihe kasị mma nke echiche ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị nkuzi na e dere na nke a na-soro kpamkpam. Nke a ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na akara na ihe ndị a chọrọ na nke kacha mma e nyefewo ha n'aka ka usoro dị ka mma. Iji nweta nkuzi ogologo ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi isi na isi ihe ọmụma na e kwuru ebe a n'ime.
Gịnị kwesịrị-mere n'ihu nsị na ahịhịa na Mac
Ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na nke Steti nke nkà ahịhịa nhicha ọ na-gwara iji jide n'aka na faịlụ na e nwere n'ime ndị ahịhịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-achọgharị na ndị niile dị mkpa faịlụ na-amịpụtara. Tupu ahịhịa na-bupụrụ ọ na-gwara iji jide n'aka na faịlụ na na-emi odude n'ime usoro na-ahụta ka mkpa na ọdịdị na-achọgharị na ọ ga-mere n'aka na ihe ndị a niile faịlụ ndị na ebe nke mere na mgbe ndị ahịhịa na-arahụ onye ọ bụla nke ndị a na-ehichapụ accidently.
Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ mgbe nwere ga-esi n'ime nke site n'ịhụ na ndị dị otú ahụ omume na-chọpụtara na ga-eme ka n'aka na efu ahịhịa na-nyochara nke data na e furu efu na ozugbo ọ a hụrụ na ọ bụ mgbe kwadoo . Iji zere nke a dum mmekpahu ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma omume etinyere ie ịhụ faịlụ ọma tupu ndị ahịhịa biini bupụrụ.
Olee otú emezi ihe efu ahịhịa
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-nyere site Wondershare Data Recovery maka Mac. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na àgwà na-agbakwunyere n'ime usoro ihe omume na-tinye n'ọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ndị na-enwe enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-dụrụ jide n'aka na software omume na-eji na Lien na ntụziaka na e nyere site na mmepe na na ukara website nke Wondershare. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ihe kasị mma na-eme ka usoro site na nbudata na na na wụnye a usoro na mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị-emeli ụdị ihe iseokwu na-metụtara data ọnwụ na mgbake. The Wondershare Data Recovery for Mac ga-ahụ na ndị a niile mbipụta na-weghachiri eweghachi na-kpebiri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu nke mere na onye ọrụ na-pacified na ike na-elekọta mbipụta na-metụtara nke a onu na kasị mma n'ụzọ.
Akwado ụdị faịlụ mgbe ọ na-abịa a usoro ndị dị ka ndị na-eme ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye maara nke ọma banyere ọnọdụ nke metụtara usoro ihe omume na mgbe ndị kasị mma ọnọdụ na ụdị faịlụ ẹkedori usoro ihe omume ahụ n'ụzọ:
Usoro na e metụtara omume a bụ dị ka ndị na ọ bụ kwa-ahụ kwuru na usoro e Bilie screenshots iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a:
1. Site URL http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe omume ebudatara, arụnyere na-agba ọsọ:
2. Mgbe ịpị furu efu faịlụ mgbake nhọrọ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mbanye na nke ahịhịa na-emi odude họrọ na onye ọrụ na-emekwa ka n'aka na Doppler button na-enwe ahụ tụgide ebe search na mgbe ahụ kụziere ya na kasị mma n'ụzọ:
3. The faịlụ na a hụrụ bụ ndị na e furu efu na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị a faịlụ ndị juputara na-achọgharị na ndị na mkpa na-natara mezue usoro na zuru.
Ihe a ga-chọpụtara tupu data mgbake?
Ọ dị mkpa iburu n'obi na dị mkpa faịlụ na nchekwa na-anya maka na ọ bụrụ na ihe ọ bụla n'ime ha a na-efu mgbe ahụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na onye ọrụ kwesịrị-agba ọsọ ahụ data mgbake software omume iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere ka usoro na onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma amụọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Ihe a ga-chọpụtara mgbe data mgbake?
The azịza nke ajụjụ a dị nnọọ mfe ma onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na faịlụ na nchekwa weghachiri eweghachi na-ebe na mgbe ha na-hụrụ ndabere na-kere enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge ịzọpụta onwe si hassle n'ọdịnihu na àgwà nke na-eme ka ndabere kwesịrị-ahụ na-aga n'ihu.
Ajụjụ 1 -
Olee mgbe ị efu gị ahịhịa na Mac?
Ajụjụ 2 -
Ị furu efu dị mkpa faịlụ n'ihi nke ahụ?
Apple GarageBand maka Mac
> Resource> Mac> Olee imezi efu ahịhịa na Mac ịzọpụta gị data